Hate Speech | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ဆွန်ယက်ဆင်၏ အရေးသုံးပါး
Milestones in the Mirror »
စကားလုံးများဟာ လူတွေရဲ့ အတွေးတွေ နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများမှာ သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းမှာ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်။ အခုလို
သွေးဆူနေတုန်းဆို လူကိုသေတောင် သေလောက်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ နားထောင်သူများကို ကိုယ်မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တမင်တကာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိကရုဏ်းကြီးထွားလာစေရေး ကိုသာ ရောက်စေလို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။
အခု အဓိကရုဏ်းမှာအသုံးများနေတဲ့စကားလုံးများရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာ လူမျိုး၊ဘာသာနဲ့ ဓလေ့မတူသူများကို ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံလိုတဲ့ ဆိုလိုချက်တွေ တသီတတန်းကြီးပါနေလို့ ပါပဲ။ ကိုယ်က တစ်လုံးသုံးလိုက်တိုင်း ခွဲခြားပါ နှိမ်ချပါလို့ နားထောင်သူကို ပြောနေတာနဲ အတူတူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မျိုးတုန်းအောင်သတ် ပစ်ပါလို့ တွန်းနေတာနဲ့ အတူတူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
1 thitni on June 25, 2012 said:
I agree with the writer. Words can be used not only to inspire us but also to dehumanize us. The Arakan conflict should be considered in the context of our history and political conditions. There are people or forces who incited the communal strife in Arakan. Maybe they want to imply that the military is still important. Maybe they want to maintain military dictatorship.
2 shwezinu on June 28, 2012 said: